သြဇာအရှိဆုံးအမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းမှာ ပါဝင်သွားတဲ့ ပရီယန်ကာချိုပရာ - For her Myanmar
ပရီတို့ကတော့ စန်းတွေ ဆက်တိုက်ပွင့်နေတယ် ဆိုရမလားနော်
လတ်တလောလေးမှာတင် အသက်ဆယ်နှစ်ကျော်ငယ်တဲ့ ချစ်သူနဲ့ ငါးရက်တိုင်တိုင်မင်္ဂလာပွဲကြီး ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပခဲ့သူ အိန္ဒိယမင်းသမီးချော ပရီယန်ကာ ချိုပရာဟာ Forbes မဂ္ဂဇင်းက ရွေးချယ်တင်ပြတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာသြဇာအရှိဆုံး အမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းထဲပါဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းထဲမှာ ပရီယန်ကာအပါအဝင် အိန္ဒိယအမျိုးသမီး လေးယောက်ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါဟာ သူ့အတွက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရွေးချယ်ခံရခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီယန်ကာဟာ Forbes က ရွေးချယ်တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ သြဇာအရှိဆုံးအမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မနှစ်က စာရင်းမှာတော့ ၉၇ ယောက်မြောက် အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ် ၂၀၁၈ မှာတော့ သုံးနေရာတက်လို့ ၉၄ ယောက်မြောက် သြဇာအရှိဆုံး အမျိုးသမီးဖြစ်သွားပါပြီ။
Related Article >>> ပရီယန်ကာချိုပရာ နဲ့ နစ်ခ်ဂျိုးနက်စ် တို့ရဲ့ အချစ်လမ်းခရီး
ဒီအကြောင်းကို မင်းသမီးက သူ့ရဲ့ Instagram အကောင့်မှာတင်ခဲ့ကာ ဒီလိုဆိုခဲ့ပါတယ်။
Thank you @forbes! Honoured to beapart of such an exclusive and illustrious list of #PowerWomen in the world for the second time.. It’sareminder to stay hungry, keep pushing the status quo and continuing to do what I love. And on that note…#backtowork #ForbesTop100MostPowerfulWomen
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Forbes ။ အခုလို စွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့ ထူးချွန်အမျိုးသမီးစာရင်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပါဝင်ခွင့်ရလို့ သိပ်ကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်မကို အငတ်ခံဖို့ (မနေမနားကြိုးစားတာကို ဆိုလိုချင်တယ်နဲ့တူပါတယ်)၊ လက်ရှိနေရာကနေ ဆက်ပြီးအားထုတ်ဖို့၊ ကျွန်မမြတ်နိုးတဲ့အရာကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ အားပေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒါ့အပြင် Hash Tag နဲ့ Back to Work လို့ရေးထားပါတယ်။ ကြည့်ရတာ မင်္ဂလာပွဲအပြီး အလုပ်တွေပြန်စနေပြီတူပါရဲ့နော်။
Related Article >>> လက်ထပ်ခါနီး အပျော်ခရီးမှာ အလှကြီးလှနေတဲ့ ပရီယန်ကာချိုပရာ
Forbes ကတော့ ပရီယန်ကာကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ အအောင်မြင်ဆုံး ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီးဖြစ်သလို ဟောလိဝုဒ်အထိခြေဆန့်ကာ အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ ပရီယန်ကာဟာ ဟောလီးဝုဒ်က Quantico ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်သလို Baywatch ရုပ်ရှင်မှာလည်း ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူဟာ ယူနီဆက်ဖ် ရဲ့ သံတမန်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Forbes မဂ္ဂဇင်းက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒီဇင်ဘာလရောက်ရင် ကမ္ဘာအနှံ့က နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ နည်းပညာ၊ လူမှုရေး နဲ့ ပရဟိတ၊ အနုပညာ နဲ့ ဖျော်ဖြေရေး စသဖြင့် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံက ထိပ်တန်းအမျိုးသမီးတွေကို ရွေးချယ်ပြီး သြဇာအရှိဆုံးအမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းကို ရွေးချယ်ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီနှစ်စာရင်းရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာနေရာယူထားသူက ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ အဓိပတိ (သမ္မတ တို့ ဝန်ကြီးချုပ်တို့လို ရာထူးပါ) အန်ဂျလာမာကေး ဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းမှာပါတဲ့ အခြား ထင်ရှားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ အဲလိဇဘက်ဘုရင်မကြီး၊ အိုင်ဗန်ကာထရမ့်၊ ဆရီနာဝီလျှံ (တင်းနစ်အားကစားမယ်)၊ အော်ပရာဝင်းဖေး တို့ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ဘီယွန်စေးလ် နဲ့ တေလာဆွစ်ဖ်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ယောင်းတို့လည်း ဒီလို ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီး စာရင်းဝင်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့..
References : www.ndtv.com, dailymail, forbes
ပရီတို့ကတော့ စနျးတှေ ဆကျတိုကျပှငျ့နတေယျ ဆိုရမလားနျော
လတျတလောလေးမှာတငျ အသကျဆယျနှဈကြျောငယျတဲ့ ခဈြသူနဲ့ ငါးရကျတိုငျတိုငျမင်ျဂလာပှဲကွီး ခမျးခမျးနားနား ကငျြးပခဲ့သူ အိန်ဒိယမငျးသမီးခြော ပရီယနျကာ ခြိုပရာဟာ Forbes မဂ်ဂဇငျးက ရှေးခယျြတငျပွတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှငျး ကမ်ဘာပျေါမှာသွဇာအရှိဆုံး အမြိုးသမီး ၁၀၀ စာရငျးထဲပါဝငျသှားပွီဖွဈပါတယျ။ ဒီစာရငျးထဲမှာ ပရီယနျကာအပါအဝငျ အိန်ဒိယအမြိုးသမီး လေးယောကျပါဝငျပါတယျ။
ဒါဟာ သူ့အတှကျ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ရှေးခယျြခံရခွငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပရီယနျကာဟာ Forbes က ရှေးခယျြတဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈရဲ့ သွဇာအရှိဆုံးအမြိုးသမီး ၁၀၀ စာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ပါသေးတယျ။ မနှဈက စာရငျးမှာတော့ ၉၇ ယောကျမွောကျ အမြိုးသမီးဖွဈခဲ့ပွီး ဒီနှဈ ၂၀၁၈ မှာတော့ သုံးနရောတကျလို့ ၉၄ ယောကျမွောကျ သွဇာအရှိဆုံး အမြိုးသမီးဖွဈသှားပါပွီ။
Related Article >>> ပရီယနျကာခြိုပရာ နဲ့ နဈချဂြိုးနကျဈ တို့ရဲ့ အခဈြလမျးခရီး
ဒီအကွောငျးကို မငျးသမီးက သူ့ရဲ့ Instagram အကောငျ့မှာတငျခဲ့ကာ ဒီလိုဆိုခဲ့ပါတယျ။
ကြေးဇူးတငျပါတယျ Forbes ။ အခုလို စှမျးရညျမွငျ့မားတဲ့ ထူးခြှနျအမြိုးသမီးစာရငျးမှာ ဒုတိယအကွိမျမွောကျပါဝငျခှငျ့ရလို့ သိပျကိုဂုဏျယူမိပါတယျ။ ဒါဟာ ကြှနျမကို အငတျခံဖို့ (မနမေနားကွိုးစားတာကို ဆိုလိုခငျြတယျနဲ့တူပါတယျ)၊ လကျရှိနရောကနေ ဆကျပွီးအားထုတျဖို့၊ ကြှနျမမွတျနိုးတဲ့အရာကို ဆကျလကျလုပျဆောငျဖို့ အားပေးလိုကျတာပါပဲ။ ဒါ့အပွငျ Hash Tag နဲ့ Back to Work လို့ရေးထားပါတယျ။ ကွညျ့ရတာ မင်ျဂလာပှဲအပွီး အလုပျတှပွေနျစနပွေီတူပါရဲ့နျော။
Related Article >>> လကျထပျခါနီး အပြျောခရီးမှာ အလှကွီးလှနတေဲ့ ပရီယနျကာခြိုပရာ
Forbes ကတော့ ပရီယနျကာကို ရှေးခယျြခဲ့တာ အအောငျမွငျဆုံး ဘောလိဝုဒျမငျးသမီးဖွဈသလို ဟောလိဝုဒျအထိခွဆေနျ့ကာ အောငျမွငျခဲ့သူဖွဈတာကွောငျ့လို့ဆိုပါတယျ။ ပရီယနျကာဟာ ဟောလီးဝုဒျက Quantico ဇာတျလမျးတှဲရဲ့ ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးဖွဈသလို Baywatch ရုပျရှငျမှာလညျး ပါဝငျထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူဟာ ယူနီဆကျဖျ ရဲ့ သံတမနျတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
Forbes မဂ်ဂဇငျးက နှဈစဉျနှဈတိုငျး ဒီဇငျဘာလရောကျရငျ ကမ်ဘာအနှံ့က နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး၊ နညျးပညာ၊ လူမှုရေး နဲ့ ပရဟိတ၊ အနုပညာ နဲ့ ဖြျောဖွရေေး စသဖွငျ့ နယျပယျပေါငျးစုံက ထိပျတနျးအမြိုးသမီးတှကေို ရှေးခယျြပွီး သွဇာအရှိဆုံးအမြိုးသမီး ၁၀၀ စာရငျးကို ရှေးခယျြဖျောပွလရှေိ့ပါတယျ။
ဒီနှဈစာရငျးရဲ့ ထိပျဆုံးမှာနရောယူထားသူက ဂြာမနီနိုငျငံရဲ့ အဓိပတိ (သမ်မတ တို့ ဝနျကွီးခြုပျတို့လို ရာထူးပါ) အနျဂလြာမာကေး ဖွဈပါတယျ။ စာရငျးမှာပါတဲ့ အခွား ထငျရှားတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေတော့ အဲလိဇဘကျဘုရငျမကွီး၊ အိုငျဗနျကာထရမျ့၊ ဆရီနာဝီလြှံ (တငျးနဈအားကစားမယျ)၊ အျောပရာဝငျးဖေး တို့ဖွဈပွီး ကမ်ဘာကြျော အနုပညာရှငျတှဖွေဈတဲ့ ဘီယှနျစေးလျ နဲ့ တလောဆှဈဖျတို့ ပါဝငျပါတယျ။
ယောငျးတို့လညျး ဒီလို ထူးခြှနျထကျမွကျတဲ့ အမြိုးသမီး စာရငျးဝငျဖွဈနိုငျကွပါစလေို့..
Tags: Bollywood, Cele News, celebrity, Power Women, Priyanka Chopra